Kwete, hauzokwanisi kutenga iyo Apple Tarisa Nike + tambo zvakasiyana | Ndinobva mac
Zvishoma nezvishoma isu tiri kudzidza zvimwe zvakawanda pamusoro pehurongwa hwekutengesa hunowanikwa neApple nezve mhando nyowani dzeApple Watch dzakapihwa muKeynote yekupedzisira uye izvo, sezvazvakaita mune Apple Tarisa Nike + Vachatengesa musi waGumiguru 28.
Vazhinji vashandisi vanotova neApple Watch yepakutanga uye ikozvino vari kushamisika kana tambo dzakanaka dzakagadzirirwa iyo Apple Watch Nike + dzichakwanisa kutengwa zvakasiyana. Mhinduro yacho inokurumidza uye ine simba ... HERE.
Zviripachena kuti pakutanga tambo dzeApple Watch dzakasarudzika kuna Nike uye Apple ane mabhanhire akagadzirwa zvine hungwaru uye rudo haazove akawanikwa zvakasiyana neicho chiri mutumbi weApple Watch Nike +. Izvo Apple naNike zvavari kutsvaga ndezvekuti akawanda mayuniti ari kutengeswa kune izvo zvinofanirwa kuve zvakasarudzika dhizaini yeApple Watch Series 2, kune iyo iyo Nike chiratidzo chave chakadhindwa chinyorwa uye kune ayo akasungirirwa mabhanhire kuwedzera mukugadzirisa mashandiro ehurongwa kuitira kuti vawedzere "matambudziko" ekusarudza kubva muzviso zvewachi.
Isu tinotaura zvese izvi nekuti vashandisi vazhinji vakabvunza mumaforamu mazhinji kana Apple inoronga kutengesa tambo idzi zvakasiyana. Nekudaro, neimwe nzira ivo vanofanirwa kugutsa zvido zvemushandisi anotenga Apple Watch Nike + uye tambo inodambuka, kungave nekuratidza wachi yacho pachayo kana risiti yekutenga iyo yakati modhi. Hapana chinozivikanwa nezvazvo, saka isu tichafanirwa kumirira uye kwete kutarisira zviitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kwete, hauchakwanise kutenga Apple Watch Nike + tambo zvakasiyana